DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: Somaliland oo Hay’adaha Caalamiga ah ku Qasabtay inay isticmaalaan Erayga Jamhuuriyadda, kuna hanjabtay.. | HalQaran.com
DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: Somaliland oo Hay’adaha Caalamiga ah ku Qasabtay inay isticmaalaan Erayga Jamhuuriyadda, kuna hanjabtay..
Hargeysa (Halqaran.com) – Xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi ayaa shaaca ka qaaday, in hadda kaddib hay’adaha caalamiga ah ee ka howlgala deegaannada Somaliland u hoggaansamaan dastuurka u yaalla dowladda.
Dhammaan Hay’adaha ka shaqeeya gobollada iyo deegaannada ay ka taliso Somaliland ayaa lagu qasbay inay isticmaalaan hadda wixii ka dambeeya Ereyga JAMHUURIYADDA SOMALILAND.
DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: Somaliland oo Albaabada u laabtay Xafiisyadii maraakiibta Barbara & Shaqaalihii oo xabsiga la dhigay!
DAAWO VIDEO: Saraakiil ka tirsan Somaliland oo si kulul ugu jawaabtay Puntland (Maxaa Cusub)?
erayga Jamhuuriyadda Somaliland
Somaliland oo hay'adaha ku qasbaysa